God daroogada loogu kala gudbiyo ayaa laga qoday inta u dhaxaysa Maraykanka iyo Mexico | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta God daroogada loogu kala gudbiyo ayaa laga qoday inta u dhaxaysa Maraykanka...
God daroogada loogu kala gudbiyo ayaa laga qoday inta u dhaxaysa Maraykanka iyo Mexico
Ciidamada ammaanka ee dalka Mareykanka ayaa helay marin dhulka hoostiisa laga qoday oo lagu kala gudbiyo daroogada, kaasoo isku xira dhisme ay horay u daganaan jirtay maqaaxida KFC oo ku yaalla Mareykanka ilaa dalka Mexico.
Marinkaas u sameysan sida dhuumaha dhulka hoostiisa mara oo dhirirkiisa uu la egyahay 600ft(180m) ayaa ka billowda qeybta hoose ee maqaaxidaas laga guuray ee ku taalla magaalada San Luis iyo guri ku yaalla magaalada Mexico gudaheeda ah ee San Luis Rio Colorado.
Booliska ayaa godkaas sirta ah ee lama filaanka ahaa helay isbuucii la soo dhaafay waxayna xabsiga u taxaabeen ninkii lahaa dhismahaas oo ku yaalla koonfurta gobolka Arizona.
Tuhunka booliska ayaa yimid ka dib markii ay goobtaas ku tageen daba gal ay ku sameynayeen nin la soo qabtay oo lagu magacaabo Ivan Lopez, sida ay soo tabisay warbaahinta KYMA News.
Eeyaha carbisan ee booliska ayaa tilmaamay gaariga uu watay ninkaas oo ku jiray saxmadda baabuurta, xilli ay gudaha gaarigiisa u saarneyd daroogo qiimeheeda lagu qiyaasay 1 milyan oo doolar($1m).
Dambi baareyaasha ayaa sheegay in daroogada la qabtay ay isugu jirto 118kg (260lb) oo ah maandooriyaha loo yaqaanno methamphetamine, 6kg oo cocaine ah, 3kg oo fentanyl ah iyo 19kg oo heroin ah.
Ciidamada ayaa markii dambe go’aansaday in ay baaritaan ku sameeyaan guriga uu daganaa Lopez iyo dhismihiisii hore ee maqaaxida KFC, halkaasoo ay si lama filaan ah uga heleen marinka dhulka hoostiisa laga sameeyay oo lagu aadiyay jikada ay isticmaali jirtay maqaaxida.
Saraakiisha booliska Mareykanka ayaa sheegay in Godkaas maan dooriyeyaasha la mariyo uu u qodnaa 22ft oo dhinaca hoose ah, 5ft oo dhirir ah iyo 3ft oo ballac ah wuxuuna ku dhamaanayay qol jiif oo ku yaalla gudaha Mexico.
Daroogada laga helay gaariga ninka la xiray ayaa la rumeysanyahay in la soo mariyay dhuuntaas iyadoo la isticmaalayo xarig.
Ma ahan markii ugu horreysay ee shaaca laga qaado arrin noocaan ah – labo sano ka hor ayey ahayd markii dhuun sidaasoo kale u marta dhulka hoostiisa oo 2,600ft ah ay booliska ka heleen magaalada San Diego ee gobolka California.
Masuuliyiinta laamaha ammaanka ayaa sheegay in howlgalkaas lagu helay marinkii ugu weynaa ee noocaas ah, kaasoo si weyn loogu soo galin jiray daroogada noocyada loo yaqaanno cocaine-ta iyo xashiishka.
Bishii July oo kaliya ciidamada Mareykanka ee ilaaliya xuduudda waxay gacanta ku dhigeen 15kg oo heroin ah, 24lbs oo cocaine ah, 327kg oo methamphetamine ah iyo 1,900kg oo xashiish ah kuwaasoo laga soo kala qabtay xuduudaha kala duwan ee dalka Mareykanka